4.24.20 Isibuyekezo se-MCS COVID-19 Somndeni – Izikole zasekhaya iMason City COVID-19
Ngenkathi besilindele isimemezelo sikahulumeni woMbusi uDeWine sokuthi izakhiwo zesikole zizovalwa ezinye izinsalela 2019-2020 unyaka wesikole, akwenzi kube lula. Sikukhumbula ngokweqiniso ukuba nabafundi bethu, induku, kanye nemindeni ezakhiweni zethu, futhi okubaluleke kakhulu ithuba lokuxhumana mathupha.
Bukela le vidiyo ka-Superintendent Jonathan Cooper ekwabelana ngokubhekisisa okwakha i- #MasonMoments ngalesi sikhathi se-coronavirus – futhi ikakhulukazi nge-Class yethu ye 2020.
Ngabe ubukeka kanjani wonke lo nyaka wesikole?
Othisha bethu nabasebenzi bazoqhubeka nokusebenzela abafundi kanye nemindeni yethu ngamava okufunda okukude lapho siqeda unyaka. Iqembu lethu licabanga njalo ukuthi lingaqinisekisa kanjani ukuthi izinhlelo zethu ziyasekelwa ngangokunokwenzeka kubafundi bethu nakwabasebenzi bethu ngalesi sikhathi esingakaze sibonwe., nokuthi silungiselela ikusasa ngokusemandleni ethu onke.
Sizoqeda imiyalo emisha yokufunda okude ngesonto ngaphambi kosuku lokugcina lwesikole. Meyi 21-27 kuzoba yisikhathi sokuba abafundi babe nokuhlangenwe nakho okubanika ukuvalwa namathuba okusho okuhle kothisha babo nalabo afunda nabo, kanye namathuba abafundi okuthola ukwesekwa njengoba kudingeka. Lokhu kungafaka ukubamba imigubho yokuphela konyaka yendabuko kanye nemisebenzi yokuvala endaweni ebonakalayo. Ngalesi sikhathi, othisha bethu bazobandakanyeka nokufunda kobuchwepheshe obudingekayo ukulungiselela i 2020-2021 unyaka wesikole.
Ingabe eminye imisebenzi yabafundi, kufaka nemigubho yokuphela konyaka yesikole, kukhanseliwe?
Imisebenzi yobuso nobuso yabafundi iyakhanselwa kulo lonke unyaka wesikole ngenxa yokuvalwa kwezakhiwo. Noma kunjalo, abasebenzi basebenza ukudala izikhathi zokuxhumana eziphephile, uhambo lwensimu ebonakalayo, njll.
Kuthiwani ngokuqala kokuzivocavoca kwe-Class of 2020?
NgoLwesine, sithole le nkomba elandelayo eMnyangweni Wezemfundo wase-Ohio.
"UMnyango Wezemfundo e-Ohio ubusubuza imibuzo eminingana ngemikhosi yokuthweswa iziqu neminye imikhosi yokutholwa kwabafundi yokuphela konyaka.. Abafundisayo, abafundi nabazali babuza ukuthi kufanele bazame yini ukubamba izehlakalo zomuntu uqobo zalolu hlobo. Ngenkathi sikuqonda ukubaluleka, isiko nemicikilisho yokudlula eminingi yale micimbi, ikakhulukazi abadala bethu, izikole kufanele zibambe imicimbi cishe kunokuba yenze imicimbi yangabantu yalolu hlobo, futhi uqophe le micimbi noma nini lapho kungenzeka futhi kunokwenzeka. Imikhosi yokuthweswa iziqu kwabafowethu akufanele yenziwe. Ngokwengeziwe, sincoma ukubamba ukuqashelwa okubonakalayo noma okuhlukile ngosuku lokuqala lokuphothula iziqu noma usuku olusondele kakhulu ngalolo suku. Umbusi uDeWine, ngesikhathi esithangamini nabezindaba sangoMsombuluko, Ephreli 20, kushiwo, 'Ukubuthwa kwenani elikhulu labantu kuyisimo esiyingozi. Njengoba nje izikole zenziwe ngezinto ezintsha ngokuqondene nendlela yokufundisa zisuka kude, Ngiyazi ukuthi bazoba nobuciko njengoba bebheka ukuthi kanjani… bahlonipha abafundi… 'Sicela umphakathi wezemfundo uhlangane ukuhloniphe abafundi bethu, ikakhulukazi abadala bethu, ngendlela engabeki ubungozi empilweni kunoma ngubani. Izikole kufanele ziqhubeke nokubona ukubaluleka kwemikhawulo yokubuthana kweziningi, futhi imicimbi kumele ihambisane noMnyango Wezempilo wase-Ohio. ”
Mason, siyabona ukuthi ukuthweswa iziqu kuyisiko elihlonishwe isikhathi nefa elihlonishwe. Sizolandela imiyalo yombuso futhi sibambe umsebenzi wokuqalisa ngokomzimba njengoba ekuqaleni bekuhlelelwe ngeSonto, Meyi 24, 2020. Umcimbi uzoba yinhlanganisela yazo zombili izikhathi ezi bukhoma nezirekhodwe. Sihlose futhi ukudala umgubho wezinyathelo eziningi we-Class of 2020 lokho kuzobandakanya amathuba azwakala enhliziyweni wokuxhumana komuntu nomuntu. Uthishanhloko we-MHS uBobby Dodd uzokwabelana ngohlelo lonke lokuqalwa kwabadala nemindeni yabo ngesonto elizayo.
Uma ingane yakho idinga izinto ezidingekayo zokufunda kude, sicela uthumele uthishanhloko wengane yakho futhi uzosebenza nawe ukuze alethe into yakho, noma woza nendlela ephephile ongayithatha.
Evikini elizayo, sizomemezela izinhlelo zemindeni yokubuyisa izinto ezisele ezisele esikoleni. Ukuze kulondolozwe izidingo zokuqhelelana nomphakathi, imindeni izocelwa ukuthi ihlale ezimotweni, futhi izinto zengane yakho zizofakwa esiqwini semoto yakho.
Ngabe imidlalo yentwasahlobo ikhanseliwe?
Njengoba izikole zihlala zivaliwe ngokomzimba unyaka wonke osele, yonke imidlalo yasentwasahlobo nemiqhudelwano ikhanseliwe yi-Ohio High School Athletic Association.
Ngabe isifunda sizocubungula ukubuyiselwa kwemali kwemisebenzi engenzeki manje?
Sicubungula ukubuyiselwa kwemali yezimali zesikole zasenkulisa, ngaphambi nangemva kohlelo lokunakekela izingane zesikole, kanye nemisebenzi okwakuhlelelwe ukuba yenziwe ngenyanga kaMeyi. Ngicela uqaphele, uma iHhovisi lethu Lezimali selithola isicelo sokubuyiselwa kwemali kuzothatha amasonto ambalwa ukucubungula.
Uma unombuzo mayelana nezimali ezithile, sicela uthinte uthishanhloko wakho wokwakha.
Izakhamizi Eziphezulu: Isikhungo se-United Way of Warren County Volunteer Resource Center ngokubambisana neWarren County Community Services sithatha izisebenzi zokuzithandela ezizimisele ukuyithenga 250 khomba izakhamizi ezihola kancane nezisengozini emphakathini wethu. Lezi izinto eziyisisekelo futhi ezingagcineki. A $50 ikhadi lesipho, uhlu lwezitolo, kanye nebhokisi kungatholwa ngoMgqibelo ngo-Ephreli 25th e-United Way of Warren County (3989 S. Umzila wase-US 42, ILebanoni, OH 45036) phakathi kuka-11 am-6pm. Ngemuva kwalokho buyisela izinto ngoLwesine ngo-Ephreli 30 ku-Warren County Community Services (570 Umzila Wombuso 741, ILebanoni, OH 45036) phakathi kuka-10 am-6pm. Sicela ubhalise ukuthola izikhala ezitholakalayo.
Ngiyabonga ngakho konke okwenzayo ngalesi sikhathi esiyinselelo. Siqinile ndawonye!